XOG: Maxaa iska ka bedalay mowqifkii AhluSuna wal jamaaca ee mamul u samaynta galmudug - Awdinle Online
XOG: Maxaa iska ka bedalay mowqifkii AhluSuna wal jamaaca ee mamul u samaynta galmudug
October 29, 2019 (AO) – Ka dib markii ay Dowladda Federaalka Somaliya garowsatay in Siyaasadda Galmudug ay weji kale yeelatay ayaa waxay is bedel ku samaysay hannaankii ay ku wajaheysay marxaladda habraaca kala guurka ee Maamulka Galmudug.
Dowladda Federaalka ayaa qaadatay go’aanka ah in ay muhiim tahay in ay la shaqayso Ahlu Sunada Galmudug, arrimo soo ifbaxay ayaana meesha ka saaray damacii hore ee dowladda iyo yoolkeedii ay ku dooneysay in Ahlu Sunna la’aanteed ay xubin ku gaysato Xafiiska Madaxtooyada.
Weji gabaxa ugu weyn ee dowladda kala kulantay Siyaasadda Galmudug ayaa ah in ay ku fashilmatay kala qaybinta Masuuliyiinta Ahlu Sunna iyo Saraakiisha Ciidamadooda, ee dhawaan lagu biiriyay Ciidamada Dowladda. Saraakiisha iyo Ciidamada ee Ahlu Sunna kuwooda la qarameeyay ayaa iska diiday in ay ka qayb qaataan, haddii ay noqoto in lala dagaalo Ahlu Sunna. Qasdiga dowladda ayaa ahaa in ay Ahlu Sunna u kala qaybiso sidii ay isaga horkeentay Madaxdii Galmudug iyo Puntland. Dowladda ayaa la fahamsan yahay in ay horey qoorta isugu gelisay Madaxweynaha Galmudug, Kuxigeenkiisa iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka. Sidoo kalena ay dab ka dhex hurisay Madaxweynihii hore ee Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Kuxigeenkiisii, Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey
Markii ay dowladdu xaqiiqsatay in Ahlu Sunna tahay awood muuqato oo ka jirta Gobolada Dhexe iyo in ay saamayn ku leedahay Arrimaha Doorashooyinka Madaxtooyada & Baarlamaanka Galmudug ayaa horseeday in ay ka laabato mowqifkeedii hore.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya inaanay Ahlu Sunna noqon sidii loo maleynayay, isla-markaana ay dowladdu garowsatay inaanan xoogagooda looga adkaan karin askar diyaarado looga daabulay Magaalada Muqdisho, laguna geeyay Dhuusamareeb. Waxaa la leeyahay dowladdu way dareensan tahay inaanu xalku xabad ku jirin.
Villa Somalia ayaa ogaatay in Siyaasiyiinta mucaaradka dowladda ay qorsheynayan in ay isbahaysi la noqdaan Ahlu Sunna, kuna garab siiyaan, sidii ay ugu soo bixi laheyd Doorashooyinka Galmudug. Dowladda oo diidan in ay isu soo dhawaadaan mucaaradka iyo Ahlu Sunada Gobolada Dhexe ayaa qayb ka ah dareenka xilligan ku dhashay dowladda.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya inaanay dowladdu doonayn in uu xumaado xiriirka kala dhaxeeya caalamka, iyadoo la’ogyahay in eedeymo xoogan kala kulantay rabshadihii hareereeyay Doorashadii Madaxtooyada Koonfur Galbeed, sanadkii hore. Dowladda ayaa maalmo ka dib xilligaa dalka ka eriday Wakiilkii Qaramada Midoobey u qaabilsanaa arrimaha Somaliya, Amb. Nicholas Haysom, ka dib markii uu dhaliilay doorkii dowladda ku laheyd doorashadaasi. Dowladda ayaa waxay markaasi iska indho tirtay dhaliilo xoogan oo kaga yimid bulshada caalamka, xilligaanse ma dooneyso in mar labaad la dhalleeceeyo.
Dowladda Somaliya ayaa waxay ka garaabeysaa in natiijo aan wanaagsanayn ay ku kala taggeen Madaxda Jubbaland, xilli beesha caalamka ay daneynaysay in labada dhinac ay isla meel dhigaan khilaafkooda, oo ka dhashay geedi-socodkii Doorashooyinka Madaxtooyada & Baarlamaanka Jubbaland. Rajadii caalamka ka qabay in labada dhinac wada hadlaan ayaa meesha ka baxday, markii dowladdu dalbatay in lagu celiyo Doorashadii Madaxtinimada Jubbaland, sidoo kalena ay xabsiga u taxaabtay Wasiirkii Amniga Jubbaland, Cabdirashiid Xasan Cabdinuur (Janan).
Arrimo badan oo is biirsaday awgood ayaana dowladda khasab kaga dhigtay in ay u tafa-xeedato, sidii ay u wanaajin laheyd xiriirka Ahlu Sunada ka dhisan Bartamaha Somaliya.
Ilo muhiim ayaa sheegaya in Villa Somalia ay durbaba la xiriirtay Madaxda Ahlu Sunada Galmudug, ayna u sheegtay in maalmaha soo socdo uu soo gaari doono Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Khayre, si loo soo afjaro khilaafka jira.
Khilaafka labada dhinac oo toddobaadyadii la soo dhaafay soo jiitamayay ayaa ka dhashay Guddiga Farsamada Dhismaha Galmudug, oo 8-dii bishan ay magacawday Wasaaradda Arrimaha Gudaha Somaliya. Ahlu Sunna oo ka hadashay 12-kii bishan ayaa sheegtay in magacaabista guddiga uu hareer marsan yahay heshiiskii ay labada dhinac wada gaareen billo ka hor. Ahlu Sunna ayaa ka carootay iyadoo xubnaha guddigan ay u badan yihiin safka dowladda, waxayna toddobaadkii hore magacawday Guddiga Doorashooyinka Galmudug & Xalinta Khilaafaadka, iyadoo dadka Soomaaliyeed iyo caalamkaba tustay galaangalka ay u leedahay in ay maamul cusub u soo dhisi karto dadka reer Galmudug.
Si kastaba ha-ahaatee Ahlu Sunada Galmudug ayaa markasta diyaar u ah in ay dowladda kala xaasho wax kasta oo ku aadan arrimaha siyaasadda, haddii aanu gacan maroojis jirin.
Previous articleWararkii Ugu Danbeeyay Xaalada Guud Ee Magaalada Baladweyne :- (Sawiro)
Next articleXaafado ka tirsan magalada baladweyn Oo ku go,doomay dadka qaar ka mid ah